Maalinta: Abriil 11, 2018
Warbixinta UTIKAD ee lagu ogaanayo Qiimaynta Dhexdhexaadinta ee Gaadiidka Guusha
Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee UTİKAD'in ayaa si aad ah u daneynaya shirkadda diyaaradaha dhowr sano, soo dejinta shirkadaha diyaaradaha si loo yareeyo kharashaadka sare ee ay abuureen canshuuraha xad-dhaafka ah iyo dadaallada ay sameeyeen. [More ...]
Gaadiidka tareenka, oo loo diidey inuu yahay habka ugu nabdoon ee gaadiidka adduunka, ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa meelo badan oo adduunka ah. Switzerland waa waddankii ugu horreeyay ee maskaxda ku soo dhaca markii aad tiraahdid tareenka. Dadku kaliya waxay awoodaan in ay ku safraan tareenka wadankan [More ...]
Ankara oo ku biirtay Howtentray
Bixinta adeegga miyuusigga ee magaalada raaxada ee metro Başkentray, Wasiirka UDH Ahmet Arslan iyo ra'iisul wasaaraha Binali Yildirim, iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ... [More ...]
IETT Abaalmarinta Shaqaalaha
Turkey ayaa ugu aasaasay oo ku kalsoon brand ee gaadiidka magaalooyinka dadweynaha System Development Performance IETT (PGS) ku abaalmarisay shaqaalaha ay ku yiilleen. Kulamada Abaalmarinta PGS ee lagu qabtay Xarunta Dhaqanka Bağlarbaşı, İBB Xoghayaha Guud Dr. Hayri [More ...]
War-saxaafadeed ku saabsan Qaraxii Korkutan ee ka dhacay Ankara
Saldhigga metrooga ee ku yaal magaalada Ankara sababtuna tahay qaraxu wuxuu udhacey wareegga gaagaaban ee korantada isku-beddelka 10 daqiiqado joojinta ayaa istaagay. Iyaga oo ka argagaxay dhawaqa qaraxa, rakaabku waxay iskaga soo tuureen gaadhiga. Dhaawac kasta [More ...]
Xaflaanta furan ayaa la furayaa berrito
520, oo u adeegi doona kumanaan kun oo qof maalin walba, ayaa la furi doonaa bisha Abril iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Başkentray wuxuu adeeg faneed ka fidin doonaa magaalada gudaheeda iyadoo la adeegsanayo raaxada metro u dhaxaysa Sincan iyo Kayaş [More ...]
85 Looma Buuxin Mashruuca 51 ee Kaman, Izmit iyo Gebze
Gudoomiyaha Gobolka GoOD Party Serdar Kaman, maadaama 2009 Kocaeli Metropolitan Municipal ay ka hoos shaqeyso doorashada ayaa wali sii sheegaya inuu mashruucu balan qaadayo. Kaman, “Sannadkii 2009 ee Izmit iyo Gebze guud ahaan [More ...]
Shaqaalaha Qalabka Metro ee AKM-Kizilay oo sii wadaya gaasta oo dhan
Xarunta dhaqanka ee Atatürk (AKM) –Gar-Courthouse-Kızılay, dhismaha ay la wareegtay Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta ee ka socota Degmadda Ankara ee Caasimadda. Macluumaadka ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
TÜVASAŞ waxa uu noqday Hay'adda Hore ee IRIS ee qaybta dadweynaha
TÜVASAŞ wuxuu noqon doonaa qeybiyaha KIWA A.Ş. inta u dhaxeysa 26.02.2018-04.03.2018. Natiijadii ka soo baxday xisaab xirkii IRIS ee ay fulisay 20.03.2018 illaa iyo taariikhda ay shaqeyneyso shahaadooyinka IRIS iyo shahaadooyinka nidaamka maaraynta, oo ay ku jiraan giraanta IRIS adoo raacinaya [More ...]
Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Tahir Akyurek, Meram waxaa lagu dari doonaa dhismaha Meesha ugu dambeysa ee Joogtada Dhimashada ee Terrey Car Park onsite. Duqa magaalada Akyürek wuxuu cadeeyay in goobta baabuurta la dhigto ay la kulmidoonaan baahi muhiim ah oo gobolka uuna yiri, “Meram wuxuu ku yaal Son Durak. [More ...]
Akçaray Daily ayaa jabisay rikoodhkeeda u gaarka ah 36 Thousand Passengers
Akçaray, oo ay bixiso Kocaeli Metropolitan District, ayaa si aad ah u heleysa feejignaan badan maalin kasta oo dhaafaya. Bixinta gaadiid raaxo leh wakhti gaaban oo leh isirka bari-galbeed ee Izmit, Akçaray, baahida darteed [More ...]
RayHaber 11.04.2018 Warbixinta Shirka
Sanduuqa Gear - In la Iibsado oo Dhamaystiran (TÜLOMSAŞ) 14. iyo 15. 13 oo leh Isgoysyada Scissor ee Wadooyinka. Soo Iibsiga Adeegyada Lagu Xirayo Wadada Wadada E 5000 Nooca Wershadaha Laydhka Korontada [More ...]
Kocaoglu, Baagaga La Dajiyay ee Hatay
Duqa magaalada Aziz Kocaoglu ayaa kormeeray dhismaha xeradda 8 iyo baarkinada gawaarida 429 ee hoos tagaya Hatay. Baarkinka gawaaridu wuxuu furi doonaa bilaha xagaaga, oo leh meelaha fadhiga ku yaal saqafka, barkad iyo barxad. [More ...]
Wadooyinka Wadooyinka ee Haydarpasa iyo Sogutlucesme
29 waxay ka shaqeysaa yareynta masaafada u dhaxaysa isku xirka Zeynep Kamil iyo Kadikoy masaafada gaagaaban, waqti badbaadin oo yareyso saameynta taraafikada la yeelato Marmaray, oo loo furay adeegga bisha Oktoobar 2013. [More ...]